Barnoota – OROMP4 Studio
Akkaataa beektoota xin-sammuutiin namooti haala lammaffaa qaban“Jalloota”/namoota waan badaa yaadan/ [ “Pessimist”] jedhamu.Namooti akkasii, waan hunduumaa duukaneessanii kan ilaalaniidha. Sammuu isaanii keessatti namootaaf waan gaariifi qajeelaa ta’e kan hin yaannedha. Namoota waan siirrii ta’eelee,sirrii miti jedhanii, jallisanii faallaa yaadanidha.Waanisaan fayyadu kennuuf yoo waamtan ni didu.Mammaaksa Oromoo keessatti “Ijoollee nyaataaf waaman ergaa seetee diddi”Jedhu. (“ijoolee nyaata akka nyaattuuf waaman iddoo tokkotti erganii hojii nahojjeechiisuuf na waamu jettee diddi “) jechuudha.
Akka ragaan biiroo qorichaafi yekkaa mootummoota gaamtoomanii adduunyaa A.L.A bara 2013 ibsetti, adduunyaa’rratti tilmaamaamaan namooti miliyoona 246,ta’an qoricha dhorkamaniin fayyaadamaniiru.BiyyaU.S.Ameerikaa keessatti namooti qorichawwan, dhugaatii alkooliifi timboodhaan fayyadaman kan lakkoofsi isaanii baayi’ee ta’e, du’aaf kan saaxilaman yoo ta’uu; wagga waggaan namoota 500,000 olitti lakkaa’amaniif sababa du’aa ta’eera.Biyya Ameerikaa keessatti, nama afuur keessaa tokko alkoolii, timboo ykn qoricha sammuu nama hadoochaniin fayyadama.
Miidhaa baalli /qorichowwan/ sammuu hadoochanii- Akkaataa qorannoon agarsiisutti rakkoo bal’aa faayyaa hawaasaafi diinaagdee irratti inni fidu guddaadha.Innis qaama namaa keessaa, sammuu, jeequmsa sammuu’rratti miidhaa guddaa fida.Sababii kanan yaallii of-ajjeesuu gochuu, dhukkuba qaamaa, haala hojii qaamaa dadhabsiisuufi jeequmsa irribaa namatti fida. Timboo xuuxuufi dhugaatii alkoolii dhuguudhaan rakkinni dhufu’mmoo; nyaata hamma barbaadamuu gad-nyaachuu/ hirdhina nyaataa/, deddeebi’anii dhukkuba sammuun dararamuu, balaa HIV fi dhibee qaama saalaaf saaxilamuu, dhibee tiruu,amala hamaa ykn yekka adda addaaf kakka’uufi rawwachuu, kkf.Ijoolleefi dargaggooti/shamarran/ baala/qoricha/ sammuu haddoochu kunniiniin, akka hin fayydamne/akka hinsaaxilamneef/ hawaasi, manneetiin barnootaa,warri ijoolleefi dhaabbiileen mootummaafi miti mootummaa dhimma kanaa wajjin hojjetan, itti gaafatama guddaa qabu.Kundirqama hundumaati.